Iindaba-Kutheni le nto igasket yokuvala ivalve iya kuba kukuvuza kweoyile?
Kutheni i-gasket yokuvala i-valve iya kuba kukuvuza kweoyile?
Amaxesha amaninzi ukuvuza kwe-injini akunakuphepheka, ngakumbi ukuba usebenzisa ioyile embi, kukho ukungcola okuninzi kwioyile, ayisiyonyusi nje kuphela ukonakala kwenjini,
Inokubangela ukuba i-oyile ye-injini ivuze.
Makhe sixoxe malunga nokuvuza okuthile kwigumbi levalve.
Yintoni ebangela ukuba igumbi levalve livuze? Ungajongana njani nayo?
Yintoni i-gasket valve cover gasket?
Isembozo se-injini ye-gasket- eyaziwa nje ngokuba ligumbi levalve.Lililungu lokutywinwa kwenxalenye ephezulu ye-injini. Itywiniwe ngeoyile ye-injini engqinelana nepani yeoyile ukuze ioyile ingavuzi xa injini isebenza.Intloko yesilinda engqinelana nomzimba wesilinda, ivelufa ehambelana nayo ifakwe kwintloko yesilinda, kunye nomzimba wesilinda yenziwe kwigumbi lokucinezela elitywiniweyo, phantsi kweemeko ezithile, ivumela umxube ovuthayo ukuba utshise ngaphakathi.Isigqubuthelo segumbi levalve ephezulu, isiciko sesilinda esisezantsi, umzimba wesilinda ongezantsi, kunye nesampulu yeoyile esezantsi.
Kutheni i-valve yokuvala i-gasketwill iya kuba kukuvuza kweoyile?
1- Ukwaluphala kwe-gasketleads ekhokelela ekuvuzeni ioyile.
Okokuqala, igalufa yegumbi levalve sele isetyenzisiwe ixesha elide, ibangela ukuguga kunye nokuphulukana namandla okutywina ukuvuza kweoyile. kukuvuza kweoyile.
Kuba igumbi levalve likwindawo ephezulu ye-injini, i-oyile iya kuqukuqela ukwehla ngentloko yesilinda emva kokuvuleka kwegumbi levalve, kuba umzimba we-injini uyasebenza
Kumaqondo aphezulu obushushu, ioyile ebambelele kumphezulu womzimba iya kuthi ngcembe inyuke, ivelise umsi oburhabaxa.
Kule meko, vula ikhava yegumbi levalve kwaye ubeke endaweni yegasket.valve ikhava ye-gasketreplacement yexabiso ayiphakamanga
I-valve ye-crankcase yokungenisa umoya enyanzelekileyo ivaliwe
Ivalve ye-PCV yenkqubo yokungenisa umoya crankcase evaliweyo, ebangela uxinzelelo olugqithisileyo ngaphakathi kumatshini kwaye ekugqibeleni ibangela ukuvuza kweoyile phantsi koxinzelelo.Ukuba le mpazamo ayifumanekanga, iya kubangela ingxaki ngakumbi kamva, njengokuvuza kwe-crankshaft yeoyile njalonjalo. Kulula kakhulu ukumisela ukuba ngaba ivalve ye-PCV isebenza ngokwesiqhelo: phantsi kweemeko zokungenzi nto, imeko yokusebenza kwevalve ye-PCV inokumiselwa kwangoko ngokuvavanya isithuba sokungena kwe-crankcase ngomnwe wakho.
Inkqubo yokuhlola i-PCV ivelufa yenkqubo yokungenisa umoya ngenkani:
Yenza i-injini ingasebenzi, susa ivalve ye-PCV kwipayipi yesembozo sesilinda, kwaye ujonge ukuba ngaba ivalve ye-PCV ivalekile na? Ukuba ubeke isandla sakho kumdibaniselwano wevalufa ye-PCV, iminwe yakho iya kuziva isomelele.
Enye indlela yokuhlola kukususa umbhobho wokungenisa i-crankcase kwifilitha yomoya emva kokufaka ivalve ye-PCV, kwaye uyigubungele ngobunono iphetshana lephepha leethishu. Xa uxinzelelo kwikhrankcase luyehla (malunga ne-IMIn), kufanele kucace gca ukuba iphepha leethishu litsaliwe ekuvulekeni kombhobho, ukongeza, emva kokumisa injini, susa ivalve yePCV kwaye uyijonge ngesandla. Ukuba kukho isandi "cofa", ivelufa ye-PCV iyaguquguquka kwaye iyafumaneka.
3- Ukungaphumeleli kwezinye iinjini kukhokelela ekuvuza kweoyile.
Ukwaluphala kwe-piston ring ye-injini kukhokelela ekutywinweni okungalawulekiyo. Xa i-injini ibaleka ngesantya esiphezulu, kwenzeka into yokuba isilinda icuthe, ekhokelela kuxinzelelo olukhulu lwegesi, kwaye kwiimeko ezinzima, ikhokelela ngqo ekonakaleni kwe-valve gasketsealant kunye ne-oyile.
Ukongeza, ngenxa yomgangatho weoyile ombi, ukuqokelelwa kwekhabhoni okubambelela ngamandla, ukufakelwa kwegasket yevalve ayisiyomgangatho, kukhokelela kumandla angalinganiyo, njl., Zonke ezi ngxaki ziya kukhokelela ekonakaleni kwe-valve cover gasketand ne-oyile.
Umonakalo wokuvuza kwesikhuselo se-rubber gasket
Nika ingqalelo unobangela wesikhuselo se-valve gasketto ukuvuza kweoyile .Konakalisa injini.
Kukho ingozi enokubakho yokhuseleko efana nomlilo obangelwe kukuvuza kweoyile kwi-valvecover gasket.
Ngenxa yokuvuza kweoyile kwisembozo segumbi levalve, ukuvuza kweoyile kuya kuhamba kumzimba wenjini. Ngenxa yamaqondo obushushu aphezulu enjini yomzimba xa injini isebenza, ioyile ebambelela kumphezulu womzimba wenjini iyakonyuka kancinci kancinci kwaye ivelise ivumba elibi. Kwiimeko ezinzima, ioyile iya kungena emotweni kunye nenkqubo yomoya, ichaphazela imeko yemoto.
Okwesibini, xa ikhava yegumbi levalveji ivuza ukunamathela kweoyile kubuninzi beemoto, ingozi ayisiyonto ilula kangako, incasa ebukhali, isithuthi ngesantya esiphezulu ehlotyeni elishushu, kuba iqondo lobushushu lokuphindaphindwa kwezinto ezininzi liphezulu kakhulu, kubangela ukunamathela kumlilo ophelileyo wokutsha kweoyile, ucinezelo lwezinye izinto ezinokutsha, ekugqibeleni kungakhokelela kwinxalenye yomlilo